आज बलेवा विमानस्थल प्राविधिक टोलीले निरीक्षण गर्दै, यात्रु संख्यालाई लिएर सर्वेक्षण जरुरी ! – ebaglung.com
आज बलेवा विमानस्थल प्राविधिक टोलीले निरीक्षण गर्दै, यात्रु संख्यालाई लिएर सर्वेक्षण जरुरी !
२०७४ माघ ११, बिहीबार १३:४२	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
3.7142857142857 out of5based on7user ratings
बागलुङ २०७४ माघ ११ । फागुन महिनाको अन्त्य तिरबाट बलेवा विमानस्थलमा विमान सेवा सन्चालन गर्ने बारेमा बागलुङ नगरपालिका, विमान कम्पनि, उड्डयन प्राधिकरणका साथै सरोकारवालाहरुबीच केहि दिन पहिले भएको सहमति कार्यान्वयनको क्रममा विमानस्थल जाँचबुझ (सर्वेक्षण) गर्न प्राविधिक टोली आज बलेवा नारायणस्थान आउने बताईएको छ । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्राविधिक टोली हिँजै आउने भनिएपनि टोली हिँजो नआएर आज आउने श्रोतले बतायो ।
विमान स्थल आसपासमा भएका अग्लाअग्ला रुख, बाँसघारीहरु काटकूट गर्नु पर्ने नपर्ने देखी विमान गुड्ने चौरमा भएका खाल्डाहरु पूरपार गर्नुपर्ने नपर्ने विषयमा प्राविधिक टोलीले निरीक्षण अनुगमन गर्ने बुझिएको छ । प्राविधिक टोली विमानस्थल अनुगमन गर्न आउने समाचारले विमान सेवा सन्चालन हुने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरण बनेको चर्चा गर्न थालिएको छ र बागलुङ नगरपालिका यसको श्रेय लिन लालायित देखिन्छ ।
यसैलाई लिएर पत्रकार बबिता पौडेलले आफनो फेसबुक वालमा यस्तो स्टाटस लेखेकी छन् :
स्टासमा धेरैले कमेन्ट पनि गरेका छन् । यिनै कमेन्ट (टिप्पणी)बाट पनि जनधारणा बुझन सकिन्छ । धेरै कोट्टाई रहन आवश्यक छैन ।
बलेवा विमान स्थलबाट विमान सेवा सन्चालनमा ल्याउनु पूर्व बलेवा-काठमाडौ, बलेवा-पोखरा, बलेवा-जोमसोम, बलेवा-भैरहवा कहाँ कहाँका लागि विमान सेवा सन्चालन गर्नाले यात्रुहरुलाई सुविधा पुग्छ, यात्रुहरुको सुलभता हुन्छ, त्यस्को गम्भीर अध्ययन, अनुगमन र सर्वेक्षण जरुरी हुन्छ । बलेवा विमानस्थलमा विमान अवतरण गराउनु मात्र उद्देश्य हुन नहुने र यसलाई कसरी दीगोरुपमा सन्चालन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सरोकारवालाहरुले सोच्नु आवश्यक रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
बागलुङ सदरमुकाम र यस आसपासका यात्रुहरुलाई बलेवा विमान स्थल र पोखरा सम्म पुग्न लाग्ने समयले निकै महत्व राख्छ । बलेवा पुग्ने मोटरबाटोको हालत खराब छ, अर्कोतिर सवारी साधनहरु नियमित सन्चालनमा छैनन् । बलेवा विमानस्थलमा पुगेर विमानबाट गन्तव्यमा जान यात्रुहरुलाई त्यत्ति सहज देखिदैन । बागलुङ बजारदेखी बलेवा पुग्न सामान्यत एक घण्टा लाग्छ भने पोखरा पुग्न अधिकतम २ घण्टा । पोखरा पुगेपछी गन्तव्यका लागि धेरै बिकल्पहरु उपलव्ध छन् तर बलेवामा अर्को बिकल्प छैन । विमान आएन वा क्यान्सिल भयो भने यात्रुहरुको बिचल्ली हुन्छ । बलेवा बिमानस्थल पुग्ने समयमा त पोखरा पुगिन्छ भन्ने यात्रुहरुको सोँचाई हुनु स्वभाविक हो ।
पहिले मोटर गुड्ने सडक थिएन । बलेवा विमान स्थलमा तीन दिनसम्म बसेर यात्रुहरुले विमान चढ्थे, गन्तव्यमा पुग्थे, त्यतिबेला बिकल्प थिएन, बाध्यता थियो र विमान सेवा चालु थियो । अहिले त्यस्तो छैन, वडावडा, गाउँगाउँ सडक यातायातले छोएको छ । मानिसहरु सिधै मोटरबाट गन्तव्यमा पुगी रहेको अवस्था छ ।
विमानसेवा यात्रुहरुको सुविधाको लागि सन्चालनमा ल्याउने हो नकि कसैको लहड पूरा गर्न ! बलेवा विमानस्थलमा विमान सेवा सन्चालन गर्ने प्रशंग उठदासाथ यात्रुहरुको उपलव्धताका बारेमा सोच्नु पर्छ । यात्रुहरुलाई बलेवा विमान स्थलबाट गन्तव्यमा जाने भरपर्दो विश्वास कसरी दिलाउन सकिन्छ ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । बागलुङ महोत्सवमा हेलिकप्टर ल्याएर वरपर घुमाए जस्तो बलेवा विमान स्थलमा विमान सेवा सन्चालन गर्नु सजिलो छैन ।
रित्तो विमान (हवाई जहाज) उडाएर कुनै विमान कम्पनि टाँट पल्टन चाहन्न । उसलाई चारो अर्थात यात्रु चाहिन्छ । बलेवा विमानस्थलबाट विमान सेवा काठमाडौ सन्चालन गर्ने सोँचाई अहिले बाहिर आएको छ । बलेवाबाट विमानमा काठमाडौ जान यात्रुहरुलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ, उनिहरुलाई कसरी विश्वस्त पार्न सकिन्छ, त्यस्को स्किम चाहियो । विमान सन्चालन गर्न लुखुर लुखुर गर्नेहरु संग के छ दूरगामी योजना ? पोखारा वा काठमाडौँका लागि यात्रु उपलव्ध हुन्नन भने बलेवा-जोमसोम वा बलेवा-भैरहवाका लागि विमान सेवा सन्चालनमा ल्याउदा यात्रुहरु उपलव्ध हुन्छन् कि ? यो पक्षमापनि समीक्षा हुनुपर्छ ।
काठमाडौँबाट बलेवा र बलेवाबाट काठमाडौँका लागि उडान भर्ने विमानहरुमा जति यात्रुहरु पुग्दैनन या जहाजमा जति सिट खाली रहन्छ त्यस्को क्षतिपूर्ति बापत बागलुङ नगरपालिकाले विमान कम्पनिलाई रकम दिने सम्झौता भएको जुन लिखत बाहिर आएको छ, त्यस्ले विमान सेवा सन्चालनको सुनिश्चिता सम्भव देखिदैन । बलेवा विमानस्थललाई गौचरणमा रुपान्तरण हुन नदिन बिकल्प खोज्नु पर्छ । बलेवा विमानस्थल सन्चालनमा ल्याउन बागलुङ नगरपालिकाले विमान कम्पनि र नागरिक उड्डयन प्रधिकरण वीच गरेको त्रिपक्षीय संझौता प्रति गम्भीर कानूनी प्रश्नपनि उठ्न लागेको छ ।
यात्रुको सुनिश्चितता सँगै फागुन महिना देखी बलेवा विमान स्थलबाट विमान सेवा सन्चालन हुने !
गुल्मी दुनाम खोलाको तटमा भेटियो अर्को वहुरुपी गुफा